Soo dejisan Smart Type Assistant 2 – Vessoft
WindowsXafiiskaSoftware softwareSmart Type Assistant
Bogga rasmiga ah: Smart Type Assistant
Kaalinta Aaladaha Smart – qalab caawiye ah oo si gaaban loo geliyo qoraalka aan khalad lahayn ee codsiyada iyo faylasha xafiisyada kala duwan. Software wuxuu taageersan yahay hawsha autoreplacement si loo ballaariyo ereyada gaaban oo gaaban erayada buuxa, iyo farsamooyinka saxda ah ee saxda ah si loo saxo khaladaadka markaad qoraysid. Kaaliyaha Aaladaha Smart wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho liiska horay loo soo saaray ee isku-xirayaasha muhiimka ah si aad u gelisid jumlado gaar ah ama ereyada muhiimka ah ee ku yaal booska cursorka. Diiwaanka software wuxuu kaydiyaa qoraallada uu isticmaluhu isticmaalo, si looga fogaado in lumiyo xogta haddii ay dhacdo nidaamka fashilka. Kaaliyaha Aaladaha Smart wuxuu awood u leeyahay inuu ku qeexo codka lagama maarmaanka u ah furaha kumbuyuutarrad kasta, oo u qoondeeyaha gaaban si aad u muujiso liiska erayada ama qoraalada waaweyn ee qoraalka. Kaaliyaha Nooca Smart wuxuu sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad qabatid qaybta la soo xulay ee shaashadda oo keydso shaashadda qaabab kala duwan oo muuqaal ah, ku duub sanduuqa ama dir e-mail.
Qorsheynta autoreplegning iyo autocorrect
Abuuraa liiska isdhexgalka muhiimka ah
Ballanta codka muhiimka ah
Waxay abuurtaa liis ka-saaris
Qabashada qaybta la soo xulay ee shaashadda
Soo dejisan Smart Type Assistant
Faallo ku saabsan Smart Type Assistant
Smart Type Assistant Xirfadaha la xiriira